RASMI: Liverpool Oo Heshiis Waqti Dheer Ah Ku Abaal Marisay Neco Williams Iyo Dareenkiisa Oo Uu Si Qiiro Leh Uga Hadlay. - Gool24.Net
RASMI: Liverpool Oo Heshiis Waqti Dheer Ah Ku Abaal Marisay Neco Williams Iyo Dareenkiisa Oo Uu Si Qiiro Leh Uga Hadlay.
August 17, 2020 Mahamoud Batalaale
Kooxda Liverpool ayaa heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixatay da’yarka aadka loo qiimeeyo ee Neco Williams kaas oo mustaqbalkiisa waqtiga fog u hibeeyay kooxdiisa Reds.
Neco Williams ayaa ka mid ah ciyaartoyda uu Jurgen Klopp u soo dalacsiiyay kooxda kowaad isla markaana rajaynaya in uu xili ciyaareedka cusub heli doono fursad ka badan intii uu xili ciyaareedkan dhamaaday ku haystay kooxda kowaad.
Warka ay Liverpool ugu dhawaaqday heshiiska cusub ee Neco Williams ayaa lagu yidhi: “Maanta Neco Williams waxa uu saxiixay heshiis cusub oo waqti dheer uu kula sii joogi doono kooxda kubbada cagta Liverpool”.
Neco Williams oo qayb ka ah kooxda uu Jurgen Klopp ku diyaarinayo dalka Austria ayaa heshiiskan cusub saxiixay isaga oo 19 sano jir ah isla markaana waxa uu farxad iyo qiiro ka muujiyay in uu ka tirsan yahay kooxdiisa Liverpool oo uu waliba waqti dheer u sii ciyaari doono.
Neco Williams oo dareenkiisa ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa dareen layaableh. Daqiiqadii ugu horaysay waxaan ka fikiray in ayna jirin meel kale oo aniga iiga fiican in aan wax ka barto oo aan ku noqon karo ciyaartoy ka fiican oo aan ka ahayn in aan halkan wiilasha kula shaqeeyo”.
“Waxaan filayaa in aanu haysano qaar ka mid ah ciyaartoyda aduunka ugu fiican isla markaana waxaanu nahay mid ka mid ah kooxaha aduunka ugu fiican” ayuu Neco Williams hadalkiisa raaciyay.
Neco Williams oo ka hadlaya in uu wax ka barto ciyaartoyda difaacyada midig iyo bidix ee Arnold iyo Robertson ayaa yidhi: “Aniga shaqsi ahaan khaas ayay ii tahay in aan maalin kastaba wax ka barto Trent iyo Robbo oo aan talladooda helo oo aan arko waxa ay sheegayaan taasi aniga waxay iga sii dhigaysaa ciyaartoy ka fiican waanan dareensanahay”.
“Maalinba maalin ayaan u qaataa, ciyaartaydu way soo qaan gaadhaysaa, waxaan horumar u samaynayaa ka ciyaartoy ahaan, sidii aan sheegay ma filayo in ay jirto meel aniga iiga fiican oo aan ku shaqayn karo waana in aan halkan ka sii wato’.